Ciidamada Burundi Iyo Kuwa Jabuuti Oo La Weeraray. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Burundi Iyo Kuwa Jabuuti Oo La Weeraray.
September 13, 2017 8:05 am Views: 201
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen difaacyo iyo saldhigyo ciidamada Ridada Jabuuti iyo kuwa gaalada Burundi ay ka kala sameysteen gobalada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe.
Dagaalka Kowaad waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen difaacyada ciidamada Burundi ay ka sameysteen deegaanka Cali Fooldheere oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalkaasi.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxey xaqiijiyeen in dagaalkan uu ka mid noqonaya dagaaladii ugu cuslaay oo ka dhaca deegaanka tan iyo markii ciidamada Gaalada Burundi ay duulaanka ku qabsadeen deegaankaasi.
Saaka aroortii waxaa deegaanka soo caga dhigtay tiro diyaaradaha Elecobtar-ka ah kuwaasi oo deegaanka ka qaaday tiro saraakiil iyo askar isugu jirta Burundi iyo kuwa Murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii xalay ka dhacay deegaankaasi.
Dhanka kale ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab waxey dagaal culus ku qaadeen difaacyada ciidamada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen xaafadaha dhanka Galbeed ee degmada Jalalaqsi.
Dagaalkan ayaa sidoo kale la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud waxeyna warar hoose sheegayaan iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo ciidamada Jabuuti lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
muuna ismaaciil cali guuleed
Hurdo iyo raaxo idiinma taalo soomaaliya ee waxaa idiin yaala holac iyo xabad ka soo dhacaysa gacanta mujaahidiin ogaada in meydkiinu badan doono insha allaah